Malunga - Beihua Polymer eziNcedisayo Co., Ltd.
International Site Yethu Alibaba
Bamdumise masterbatch nokuthintela
masterbatch agent Active
Ukufuma masterbatch izifunxi
Flame nekudodobalisa masterbatch
coupling Silane agent masterbatch
Iprofayile yekhampani Culture Dumisa izixhobo Umbutho Partner
Jiaxing Beihua Polymer eziNcedisayo Co., Ltd. yasekwa ngo-2010 kunye eyinkunzi ebhalisiweyo million 73,155 yuan. It is a ishishini eliphezulu-zobugcisa iingcali kwimveliso ezahlukeneyo masterbatch pre-abasasazekileyo. Le nkampani ibekwe Jiashan Zheshang Science and Technology Park. Le ise kumbindi Shanghai, Hangzhou kunye Suzhou. Yamkelekile zokuhamba elula, okusingqongileyo ophezulu kunye epheleleyo izibonelelo ezixhasa.
Le nkampani ibambisane Beijing University of Chemical Technology ukuphuhlisa kakuhle pre-abasasazekileyo zerabha masterbatch. Igxininisa ekusombululeni ingxaki yokujongwa kwiintsali iimveliso ngerabha, ukuphucula imeko yokusebenza kwanokwandisa inkqubo yemveliso. It neneempawu yokuphucula umgangatho kwemveliso, ukunciphisa izinga isiphako imveliso nokulondoloza amandla. Technology uguqulwe kwimveliso.
Okwangoku, umgca yemveliso nkampani kunye output iitoni 6000 ngonyaka liye labhalwa ngokusemthethweni kwimveliso, kwaye kulindeleke ukuba basebenze kunye nabahlobo ekhaya nakumazwe aphesheya ukudala ikamva elingcono.
Lwedilesi: Dibanisa: No. 36 Zhendong Road, Weitang Street, Jiashan County, kwiPhondo Zhejiang